Cybersex စွဲ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့တွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမကြည့်သည့်အခါအတွေ့အကြုံရှိသောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသည်ခြားနားစေသည် (2013) - Your Brain On Porn
မှတ်ချက်များ - လေ့လာမှုအရမူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်ဆင်တူသည့် cue-induced စွဲလမ်းမှုများ၊ လူကြိုက်များသောယုံကြည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ မကျေနပ်ဖွယ်လိင်မှုကိစ္စသည်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ porn စွဲရန်။ အဆိုပါဆန္ဒပြည့်အယူအဆထောက်ပံ့စွဲရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုမတုန့်ပြန်စွဲတူသောအပြုအမူတွေကိုဆိုလိုသည်။
Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, Pekal, ဂျေ, Schulte, FP, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2013) ။
တစ်ဦး cue-reactivity ကိုပါရာဒိုင်းခုနှစ်တွင် 100 ညစ်ညမ်းတွေကိုအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာ၏သင်တန်းသားများနှင့်အညွှန်းကိန်းမှပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။ 171 လိင်ကွဲအထီးတစ်လွတ်လပ်စွာစုဆောင်းနမူနာထဲမှာဘာစွဲ၏ခန့်မှန်းဖော်ထုတ်ရည်ရွယ်ပထမလေ့လာမှု။ ဒုတိယလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျန်းမာ (ဎ = 25) နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုအတည်ပြုရန်ကြီးနှင့်ပြဿနာ (ဎ = 25) ကျဘာအသုံးပြုသူများသည်။
ရလဒ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းတွေကိုမှလိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာ၏အညွှန်းကိန်းကိုပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုမှာကျဘာကိုဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုခန့်မှန်းဖော်ပြသည်။ ထိုမှတပါး, ဒါကြောင့်ပြဿနာဘာအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်း cue တင်ဆက်မှုကနေရရှိလာတဲ့ သာ. ကြီးမြတ်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာတုံ့ပြန်မှုသတင်းပို့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုတွေမှာနံပါတ်နှင့်စစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့အရည်အသွေးကျဘာစွဲမှဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။
ရလဒ်ယန္တရားများသင်ယူခြင်း, အားဖြည့်ယူဆသောဆန္ဒပြည့်အယူအဆ, ကိုထောကျပံ့များနှင့်ကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်စွဲလမ်း။ ညံ့ဖျင်းသောသို့မဟုတ်ချည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ reallife အဆက်အသွယ်လုံလုံလောက်လောက်ကျဘာစွဲရှင်းပြလို့မရပါဘူး။
Arnow, BA, Desmond, JE, Banner, LL, Glover, GH, Solomon, A. , Polan, ML, Lue, TF & Atlas, SW (2002) ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲယောက်ျားအတွက် ဦး နှောက်ကို activation နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွ။ ဦးနှောက်ကို, 125, 1014-1023 ။
[CrossRef]Barak, အေ, Fisher, WA, Belfry, အက်စ် & Lashambe, D. (1999) ။ လိင်၊ ယောက်ျားနှင့်ဆိုက်ဘာအာကာသ - အင်တာနက်အပြာစာပေများ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်အမျိုးသားများ၏သဘောထားအပေါ်ကွဲပြားမှု။ စိတ်ပညာနှင့်လူ့လိင်၏ဂျာနယ်, 11, 63-91 ။
[CrossRef]Berridge, KC, ရော်ဘင်ဆင်, TE & Aldridge, JW (2009) ။ ဆုလဒ်၏အစိတ်အပိုင်းများ: "နှစ်သက်", "လို" နှင့်သင်ယူခြင်း။ ဆေးဝါးဗေဒအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်, 9, 65-73 ။
[CrossRef]block, JJ (2008) ။ DSM-V ကိုများအတွက်ကိစ္စများ: အင်တာနက်စွဲ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 165, 306-307 ။
[CrossRef]ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, Schächtle, U. , Schöler, တီ & Altstötter-Gleich, C. (2011) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း - လိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်များနှင့်အင်တာနက်လိင်ဆိုဒ်များကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၏အခန်းကဏ္။ ။ CyberPsychology, အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 14, 371-377 ။
[CrossRef]Braus, D. , Wrase, ဂျေ, Grüsser, အက်စ်, Hermann, D. , Ruf, အမ်, Flor, အိပ်ချ်, မန်း, K. & Heinz, အေ ​​(2001) ။ အရက်နှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများသည် abstinent အရက်သမားများတွင် ventral striatum ကိုသက်ဝင်စေသည်။ ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဂီယာ၏ဂျာနယ်, 108, 887-894 ။
[CrossRef]ဘရောင်း, JD & L'Engle, KL (2008) ။ X-rated - အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများစိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Neurology ၏ဂျာနယ်, 36, 129-151 ။
Caplan, SE (2002) ။ ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ: တစ်သီအိုရီ-based သိမြင်-အပြုအမူတိုင်းတာခြင်းကိရိယာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 18, 553-575 ။
[CrossRef] Cohen ကို, ဂျေ (1992) ။ တစ်ဦးကအာဏာကိုမေးစရာရှိတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 112, 155-159 ။
[CrossRef]Cohen ကို, ဂျေ, Cohen ကို, P. , အနောက်, စင်ကာပူဒေါ်လာ & Aiken, LS (2003) ။ အဆိုပါအမူအကျင့်သိပ္ပံများအတွက်အသုံးချမျိုးစုံဆုတ်ယုတ် / ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates မှ။
Cooper က, အေ, Delmonico, D. , Griffin-Shelley, အီး & Mathy, R. (2004) ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု - ပြpotentiallyနာဖြစ်နိုင်သည့်အပြုအမူများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 11, 129-143 ။
[CrossRef]Cooper, အေ, McLoughlin, IP & ကမ့်ဘဲလ်, KM (2000) ။ ဆိုက်ဘာအာကာသအတွင်းလိင်: 21 ရာစုအတွက် update ကို။ ဆိုက်ဘာ - စိတ်ပညာ & အပြုအမူ, 3, 521-536 ။
[CrossRef] Cooper က, အေ, Scherer, CR, Boies, SC & ဂေါ်ဒွန်, BL (1999) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်မှု - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာခြင်းမှရောဂါဗေဒဖော်ပြချက်။ Professional ကစိတ်ပညာ: သုတေသနနှင့်အလေ့အကျင့်, 30, 154-164 ။
[CrossRef]Daneback, K. , Cooper, အေ & Månsson, S.-A. (2005) ။ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးပါဝင်သူများ၏အင်တာနက်လေ့လာမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 34, 321-328 ။
[CrossRef]Davis က, R. (2001) ။ ရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုတစ်ဦးကသိမြင်မှု-အပြုအမူမော်ဒယ်။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 17, 187-195 ။
[CrossRef]Döring, မိုင် (2009) ။ လိင်အပေါ်ကိုအင်တာနက်ရဲ့သက်ရောက်မှု: သုတေသန 15 နှစ်ပေါင်း Acritical ပြန်လည်သုံးသပ်။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 25, 1089-1101 ။
[CrossRef]Garavan, အိပ်ချ်, Pankiewicz, ဂျေ & Bloom, အေ (2000) ။ cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတွန်းအား: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် Neuroanatomical တိကျတဲ့။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 157, 1789-1798 ။
[CrossRef]Garcia, FD & Thibaut, အက်ဖ် (၂၀၁၀) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏အမေရိကန်ဂျာနယ်နှင့်အရက်အလွဲသုံးမှု, 36, 254-260 ။
[CrossRef]Georgiadis, JR & Kringelbach, ML (၂၀၁၂) ။ လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာ - လိင်မှုကိုအခြားအပျော်အပါးများနှင့်ဆက်နွယ်သော ဦး နှောက်ပုံရိပ်အထောက်အထား။ Neurobiology အတွက်တိုးတက်မှုကို, 98, 49-81 ။
[CrossRef]Goodson, P. , McCormick, D. & အီဗန်, အေ (2001) ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသောပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်း - ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏အပြုအမူနှင့်သဘောထားများကိုလေ့လာခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 30, 101-118 ။
[CrossRef]Goudriaan, AE, De Ruiter, MB, Van den Brink, W. , Oosterlaan, J. & Veltman, DJ (2010) ။ cue ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည့်ပြgambနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများ - fMRI လေ့လာမှုတစ်ခု။ စွဲဇီဝဗေဒ, 15, 491-503 ။
[CrossRef]Grant, JE, Brewer, JA & Potenza, MN (2006) ။ ပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်စွဲ၏ neurobiology ။ CNS spectrum, 11, 924-930 ။
Grey, KM, LaRowe, SD & Upadhyaya, HP (2008) ။ ငယ်ရွယ်သောဆေးခြောက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် cue ဓာတ်ပြုခြင်း။ ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ ကိုစှဲအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ, 22, 582-586 ။
[CrossRef]Griffiths က, အမ် (2000) ။ အင်တာနက်နှင့်ကွန်ပျူတာ "စွဲ" တည်ရှိနေပါသလား? တချို့ကအမှုလေ့လာမှုသက်သေအထောက်အထားများ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 3, 211-218 ။
[CrossRef]Griffiths က, အမ် (2001) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်: အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်းများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဂယက်ရိုက်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 38, 333-342 ။
[CrossRef]Grov, C တို့, Gillespie, BJ, Royce, တီ & လီဗာ, ဂျေ (2011) ။ လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအွန်လိုင်းလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှု၏ရလာဒ်များ - အမေရိကန်အွန်လိုင်းစစ်တမ်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40, 429-439 ။
[CrossRef]Gruser, SM, Wrase, ဂျေ, Klein, အက်စ်, Hermann, D. , Smolka, MN, Ruf, အမ်, Weber-Fahr, ဒဗလျူ, Flor, အိပ်ချ်, မန်း, K. , Braus, DF & Heinz , အေ (2004) ။ striatum နှင့် medial prefrontal cortex ၏ cue- သွေးဆောင် activation abstinent အရက်သမားအတွက်နောက်ဆက်တွဲ relapse နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Psychopharmacology, 175, 296-302 ။
[CrossRef]Hald, GM & Malamuth, nm (2008) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၏မိမိကိုယ်ကိုမြင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 37, 614-625 ။
[CrossRef]Hoffmann, အိပ်ချ်, Janssen, အီး & Turner, SL (2004) ။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏ပုံမှန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - အမျိုးမျိုးသောအသိအမြင်များနှင့်အေးစက်စွာလှုံ့ဆော်မှု၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 33, 43-53 ။
[CrossRef]Holden, C. (2010) ။ အမူအကျင့်စှဲအဆိုပြုထား DSM-V ကိုအတွက်ပွဲဦးထွက်။ သိပ္ပံ, 327, 935 ။
[CrossRef]Holstege, G. အ, Georgiadis, JR, Paans, AMJ, Meiners, LC, Van der Graaf, FHCE & Reinders, AATS (2003) ။ လူ့အထီးသုတ်ရည်လွှတ်စဉ်အတွင်း ဦး နှောက် activation ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 23, 9185-9193 ။
Hyman, SE, Malenka, RC & Nestler, EJ (2006) ။ စွဲ၏အာရုံကြောယန္တရားများ: ဆုလာဘ် -related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အခန်းကဏ္.ကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 29, 565-598 ။
[CrossRef]Imhoff, R. , Schmidt က, AF, Nordsiek, U. , Luzar, C တို့, လူငယ်, AW & Banse, R. (2010) ။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအချိန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကြည့်ခြင်း - ကန့်သတ်ထားသောအလုပ်အခြေအနေများအောက်တွင်လိင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပစ်မှတ်များအတွက်ကြာရှည်စွာတုံ့ပြန်မှုကြာချိန်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 1275-1288 ။
[CrossRef]ကယ်လီ၊ AE & Berridge, KC (၂၀၀၂) ။ သဘာဝဆုကျေးဇူးများ၏အာရုံကြောသိပ္ပံ: စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သက်ဆိုင်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 22, 3306-3311 ။
Kim, EJ, Namkoong, K. , Ku, T. & Kim, SJ (2008) ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲခြင်းနှင့်ကျူးကျော်ခြင်း၊ ချုပ်တည်းခြင်းနှင့် narcissistic ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များအကြားဆက်နွယ်မှု။ ဥရောပစိတ်ရောဂါကုသမှု, 23, 212-218 ။
[CrossRef]Klucken, တီ, Schweckendiek, ဂျေ, Merz, CJ, Tabbert, K. , ဝေါလ်တာ, ခ, Kagerer, အက်စ်, Vaitl, D. & Stark, R. (2009) ။ အခြေအနေအရလိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏ဝယ်ယူမှု၏အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု - အရေးပေါ်အခြေအနေသိရှိမှုနှင့်လိင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 6, 3071-3085 ။
[CrossRef]ကို, C.-H. , လျူ, G.-C. , Hsiao, အက်စ်, ယန်း, J.-Y. , ယန်, M.-J. , လင်း, W.-C. , ယန်း, C.- အက်ဖ် & Chen က C.-S. (2009) ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲစွဲလမ်းမှု၏ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများ။ စိတ်ရောဂါသုတေသနဂျာနယ်, 43, 739-747 ။
[CrossRef]Koob, GF & Volkow, ND (2010) ။ စွဲ၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology, 35, 217-238 ။
[CrossRef]Kuss, DJ & Griffiths, MD (၂၀၁၁) ။ အင်တာနက်လိင်စွဲ - ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ စွဲသုတေသန & သီအိုရီ, 116, 1-14 ။
Laier, C, Pawlikowski, M. & Brand, M. (အသေးအဖွဲပြင်ဆင်မှုများကိုလက်ခံသည်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံလွှာအပြောင်းအလဲသည်မရေရာမှုများအောက်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း.
Laier, C. , Schulte, FP & Brand, M. (၂၀၁၂) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတင်ခြင်းသည်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်စွမ်းအားကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ EPub, Doi: 10.1080 / 00224499.2012.716873
[CrossRef]Lalumiere, ML & Quinsey, VL (1998) ။ Pavlovian သည်ယောက်ျားလေးများတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 27, 241-252 ။
[CrossRef]Macapagal, KR, Janssen, အီး, Fridberg, BS, Finn, R. & Heiman, JR (2011) ။ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများသည့်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏သွား / မသွားအလုပ်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40, 995-1006 ။
[CrossRef]Martin-Soelch, C, Linthicum, J. & Ernst, M. (2007) ။ စိတ်ကြွဆေး: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအတွက်အာရုံကြောအခြေစိုက်စခန်းနှင့်သက်ရောက်မှု။ Neuroscience & Biobehavioral သုံးသပ်ချက်များ, 31, 426-440 ။
[CrossRef]Meerkerk, G.-J. , Van den Eijnden, RJJM & Garretsen, HFL (2006) ။ compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုခန့်မှန်းခြင်း - ဒါဟာလိင်အကြောင်းပဲ! ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 9, 95-103 ။
[CrossRef]က Parker, AB & Gilbert, DG (2008) ။ ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့်ဆေးလိပ်မသောက်သူများသည်ဆေးလိပ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သည့်ပုံများမျှော်လင့်နေစဉ် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု။ cue ဓာတ်ပြုမှုအသစ် နီကိုတင်းနှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုတေသန, 10, 1627-1631 ။
[CrossRef]ပေါလုက, ခ (2009) ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် arousal ခန့်မှန်း: တစ်ဦးချင်းခြားနားချက် variable တွေကိုများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 46, 1-14 ။
[CrossRef]ရှင်ပေါလ်, တီ, Schiffer, ခ, Zwarg, တီ, Krüger, THC, Karama, အက်စ်, Schedlowski, အမ်, Forsting, အမ် & Gizewski, ER (2008) ။ လိင်ကွဲခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းယောက်ျားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကို ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှု။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း, 29, 726-735 ။
[CrossRef]Pawlikowski, အမ်, Altstötter-Gleich, C တို့ & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2013) ။ လူငယ်များ၏အင်တာနက်စွဲမှုစမ်းသပ်မှု၏ဂျာမန်တိုတောင်းသောဗားရှင်း၏အတည်ပြုခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 29, 1212-1223 ။
[CrossRef]Pawlikowski, အမ် & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2011) ။ အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကစားခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - World of Warcraft ကစားသမားများသည်အလွန်အန္တရာယ်များသောဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ပြproblemsနာများရှိပါသလား။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန, 188, 428-433 ။
[CrossRef]Potenza, MN (2006) ။ မမှန် nonsubstance-related အခြေအနေများပါဝင်သည် addictive သငျ့သလော စှဲမွဲမှု, 101, 142-151 ။
[CrossRef]Potenza, MN (2008) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း၏ neurobiology: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အသစ်တွေ့ရှိချက်များ။ လန်ဒန်စီးရီး B က၏ Royal Society ၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်, 363, 3181-3189 ။
[CrossRef]Redouté, ဂျေ, Stoléru, အက်စ်, Grégoire, M.-C. , ကုန်ကျစရိတ်, N. , Cinotti, အယ်လ်, Lavenne, အက်ဖ်, Le ဘား, D. , သစ်တော, MG & Pujol, J.-F. (2000) ။ လူ့ယောက်ျားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း, 11, 162-177 ။
[CrossRef]ရိဒ်, RC, Garos, အက်စ်, လက်သမား, BN & Coleman, အီး (2011) ။ hypersexual အမျိုးသားတစ် ဦး ၏နမူနာတွင်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအံ့သြဖွယ်တွေ့ရှိချက်တစ်ခု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 8, 2227-2236 ။
[CrossRef]Shaughnessy, K. , Byers, ES & Walsh, L. (2011) ။ လိင်ကွဲကျောင်းသားများ၏အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ - ကျား၊ မတူညီမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40, 419-427 ။
[CrossRef]က Short, MB, Black က, အယ်လ်, စမစ်, AH, Wetterneck, မှန် CT & ဝဲလ်, DE (2012) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်သုတေသနကိုအသုံးပြုသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကနည်းနာများနှင့်အကြောင်းအရာ။ ဆိုက်ဘာ-စိတ်ပညာ, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 15, 13-23 ။
[CrossRef] Starcke, K. , Schlereth, ခ, Domaß, D. , Schöler, T. & Brand, M. (၂၀၁၂) ။ အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများအတွက်စျေးဝယ်တွေကို ဦး တည် Cue တုံ့ပြန်မှု။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 1, 1-6 ။
[CrossRef]Stulhofer, အေ, Busko, V. & Landripet, ဗြဲ (2010) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လူငယ်များကြားကျေနပ်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 168-178 ။
[CrossRef]Thalemann, R. , Wölfling, K. & Grüsser, SM (2007) ။ အလွန်အကျွံဂိမ်းကစားအတွက်ကွန်ပျူတာဂိမ်း -related တွေကိုအပေါ်အထူး cue တုံ့ပြန်မှု။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 121, 614-618 ။
[CrossRef]Weinstein, အေ & Lejoyeux, အမ် (2010) ။ အင်တာနက်စွဲခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏အမေရိကန်ဂျာနယ်နှင့်အရက်အလွဲသုံးမှု, 36, 277-283 ။
[CrossRef]Whitty, MT & Quigley, L.-L. (2008) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုသည်အော့ဖ်လိုင်းနှင့်ဆိုက်ဘာနယ်ပယ်များတွင်ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုကုထုံး၏ဂျာနယ်, 34, 461-468 ။
[CrossRef]Widyanto, အယ်လ် & Griffiths က, အမ် (2006) ။ "အင်တာနက်စွဲ" - ဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲမှု၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 4, 31-51 ။
[CrossRef]Wightman, RM & ရော်ဘင်ဆင်, DL (2002) ။ mesolimbic dopamine ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏ဆုလာဘ်နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း။ Neurochemistry ၏ဂျာနယ်, 82, 721-735 ။
[CrossRef]ပညာရှိ RA (2002) ။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry: unsensed မက်လုံးပေးထံမှ Insights ။ အာရုံခံဆဲလျ, 36, 229-240 ။
[CrossRef]ယန်, Z. , Xie, ဂျေ, Shao, Y.-C. , Xie, C.-M. , Fu, L.-P. , လီ, D.-J. , ဝါသနာရှင်, အမ်, Ma, L ကို ။ & လီ S.-J. (2009) ။ ဘိန်းဖြူ - မှီခိုအသုံးပြုသူများအတွက် cue- reactivity ကိုပါရာဒိုင်းမှ Dynamic အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု: တစ် ဦး fMRI လေ့လာမှု။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း, 30, 766-775 ။
[CrossRef]လူငယ်တို့, KS (2004) ။ အင်တာနက်စွဲ: အသစ်လက်တွေ့ဖြစ်စဉ်နှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များ။ အမေရိကန်အပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်, 48, 402-415 ။
[CrossRef]လူငယ်တို့, KS (2008) ။ အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲ: အန္တရာယ်အချက်များ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆေးကုသမှု။ အမေရိကန်အပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်, 52, 21-37 ။
[CrossRef]လူငယ် KS, Pistner, အမ်, O'Mara, ဂျေ & Buchanan, ဂျေ (1999) ။ ဆိုက်ဘာရောဂါများ - ထောင်စုနှစ်သစ်အတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်မှု။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 2, 475-479 ။